ဘယ်လိုဥရောပမှာတော့ရထားဖြင့်ကျောင်းသားခရီးသွား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဘယ်လိုဥရောပမှာတော့ရထားဖြင့်ကျောင်းသားခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 27/11/2020)
ဥရောပတိုက်တွင်ကျောင်းသားခရီးသွားဖြင့်ရထားမသာပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ပညာရေးနှင့်သန့်စင်, လွန်း. ပို. ပင်အရေးကြီးသောအများအပြားကျောင်းသားများကိုကြောင်း (နှင့်မိဘများ) ၏မရှိသလောက်ထင်အားလုံးလက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်, ကျောင်းသားများကိုလွတ်လပ်သောဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်လေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ, Self-ညွှန်ကြား, တာဝန်ရှိသော, ကွံအရွယ်ရောက်! တစ်ကိုယ်တော် ဥရောပတိုက်တွင်ကျောင်းသားခရီးသွားဖြင့်ရထားသင်ရုံထက်ပိုပြီးပွသနိုငျ လှပသောမြင်ကွင်းများ.
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝသွားလာရန်သင်ယူခြင်း, ယေဘုယျအားဖြင့်, အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ သိ. အဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးပါသည် အချိန်ဇယား အဘို့ဖြစ်၏ တက္ကသိုလ်. သင်တစ်ဦးရထားဖမ်းရန်မည်သို့မည်ပုံမသိကြပါလျှင်သင်ဖြောင့်တစ်ဦးကဖွင့်လာပြီစဉ်းစားလို့မရဘူး, ဘတ်ဂျက်တစ်ခုစီမံခန့်ခွဲ, သို့မဟုတ်သင်တို့၏အဝတ်ကိုပင်သန့်ရှင်းစေပါ! အချိန်များစွာရပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဥရောပတွင်ရထားဖြင့်သွားရန်ဖြစ်သည်. ဒါဟာဝေးဖွငျ့ဝိုငျးရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနှင့်သင်နေတုန်းသင်၏နောက်ပြောင်းရွှေ့ထွက်တွက်ဆဖို့အချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ် လှပသောမြင်ကွင်းကိုခံစား. ဒါကြောင့်, ကြောင်းခရီးစဉ်ကို ယူ. ကအစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျရှိထွက်နဲ့တူရဲ့အဘယ်အရာကိုသင်ယူ. ငါတို့သည်သင်တို့စတင်ရန်အချို့ကိုသင်စိတ်ကူးများပေးထားပါတယ်.
ရထားအားဖြင့်ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျောင်းသားခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်: အဆိုပါ Seine အားဖြင့်တစ်ဦးကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခံစားကြည့်ပါ
ဥရောပရှိကျောင်းသားများဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းရုံသာမကသင်သာပညာရှိလျှင်၎င်းသည်လည်းအခမဲ့ဖြစ်သည်! ကြောင်းအရာတစ်ခုခု ပဲရစ်မှာအတော်လေးရှားပါး! ပဲရစ်ဂျက်ဇမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်သီးနှံများ၏မုန့်ကိုခံစားဖို့ Seine မှစပျစ်ရည်နှင့်ဦးခေါင်းအနည်းငယ်စျေးပေါပုလင်းဖမ်းပြီး. ပဲရစ်မှရထားဖြင့်ကျောင်းသားခရီးသွားဖြစ်ပါတယ် စူပါလွယ်ကူပါတယ်, သငျသညျဘာသာစကားကိုမပြောတတ်ကြဘူးလျှင်ပင်!
ဖရက်ဒရစ် Chopin သွားရောက်ကြည့်ရှု, ဂျင်မ် Morrison, Edith Piaf, နှင့်အော်စကာ Wild မှာ ဖေရက်၏အနက် Lachaise သုသာန် ပဲရစ်, ပြင်သစ်
သင်သည်ဤတဦးတည်းကိုအနည်းငယ်ထူးဆန်းတဲ့သည်ထင်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အပြစ်မတင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဖေရက်၏အနက် Lachaise သင်္ချိုင်းအမှန်တကယ်ကယ့်ကိုကြီးမြတ်ဖြစ်ပါသည်! သိကောင်းစရာများ: entry အခမဲ့; မြေပုံတစ်ခုကို download လုပ်ပါ ကျော်ကြားသောသင်္ချိုင်းများကိုမသွားမီသင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်သို့တင်ပါ.
စောင့်ရှောက်မှု4ခရိုအေးရှားအတွက်ဝံ
ဥရောပ၌ရထားဖြင့်ကျောင်းသားခရီးသွားမယ့်ပျော်စရာထက်ပိုနိုင်ပါတယ်. ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်, သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရှာဖွေဖို့အချိန်ယူသို့မဟုတ်ပဲပြန်ပေးရန်အရေးကြီးပါသည်က! သငျသညျကျော်အချိန်ရှိပါက အားလပ်ရက်, ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? သငျသညျအခြို့သောခံစားမှု-ကောင်းသောအချိန်လေးရှာနေခဲ့လျှင်, ခရိုအေးရှားနှင့်ခရီးစဉ်ကိုမှရထားဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ရန်အချိန်ယူ Kuterevo. ရိုင်းသို့ re-ထဲသို့ဝင်ခံရဖို့နိုင်ရန်အတွက်အကူအညီလိုသူကိုအညိုရောင်ဝံများအတွက်တစ်ဦးကဒုက္ခသည်စခန်းတွင်. ကစားပျော်မွေ့, အစာစားခြင်း, သို့မဟုတ်ဤလှပသောတိရိစ္ဆာန်များကိုကြည့်ခြင်း.
ကျနော်တို့သဘာဝတရား၏ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာဆိုရင်နေစဉ်, နောက်မှတ်တိုင်သည်အမ်စတာဒမ်၏တိရစ္ဆာန်ရုံဖြစ်သည်. ထဲမှာတည်ရှိပါတယ် မြို့တိရစ္ဆာန်ရုံ လှပသောလိပ်ပြာများပြည့်နှက်နေသောကြီးမားသည့်ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်. တစ်ဦးက အမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကို. အဆိုပါတိရစ္ဆာန်ရုံလွန်းသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောပျင်းရိသောသူအဖြစ်, သားပိုက်ကောင်, နှင့် Jaguar! အဖျား: နွေရာသီမှာပွင့်နေတယ် နေဝင်ချိန်အထိ သူတို့ဖျော်ဖြေပွဲများ 6-8 စပျစ်ရည်နှင့်ညနေ.
တစ်ဦးအီဂလိုရေခဲအိမ်များတွင်မသောက်ရ, ကဲ့သို့သော, စတော့ဟုမ်း၌လုံးဝရေခဲပြင်ဘားမှာ, ဆွီဒင်
စတော့ဟုမ်းရဲ့ရေခဲပြင်ဘား, ဖွင့်လှစ်ရာ 2002, ဖြစ်ကောင်းဆွီဒင်အတွက်အများဆုံးဂုဏျအရက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဆွဲငင် 70,000 သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှစျတှငျဧည့်သည်များ, ဘီဘီစီနှင့် CNN မှာ featured ထားပြီး, နှင့်ပီယပ် Brosnan နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင် Stellan Skarsgårdကဲ့သို့သောနာမည်ကြီးတွေနေဖြင့်မကြာခဏထားပြီး. ဤအရပ်ဌာနကိုတကယ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအသစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုပေးပါဘူး “ရေမပါပဲ” အတွေ့အကြုံဖြည့်စွက်ရန်, အချိုရည်ပင်ဆွန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြ ရေခဲ Cube, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေခဲလုပ်ကွက်လုပ်ထားတဲ့ဘားပေါ်! အဘယ်ကြောင့်ဒီမှာအားလပ်ရက်အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ဥရောပတိုက်တွင်ရထားဖြင့်သင့်ရဲ့ကျောင်းသားခရီးသွားတိုးချဲ့မဟုတ်. သငျသညျကျောင်းသားတစ်ဦးအနေတဲ့အခါမှာ, ကမ္ဘာကြီးကိုအမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ကမာဖြစ်ပါတယ်.
Bruges သွားရောက်ကြည့်ရှု, Belgium like other Student Travel by Train
Bruges တစ်ဦးခရီးစဉ်နှင့်အတူဘယ်လ်ဂျီယံ၌သင်တို့၏နေထိုင်ချွတ် Start. Bruges ဘယ်လ်ဂျီယံ၏အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသောအနည်းငယ်မြို့ဖြစ်ပါသည်. ရုပ်ပုံ cobbled လမ်းကြောင်းနှင့် dreamy တူးမြောင်း, မြင့်တက်တာဝါတိုင်နှင့်အတူစီတန်းနှင့်စျေးကွက်ရင်ပြင်, သမိုင်းဝင်အသင်းတော်များ, အဟောင်းအဖြူသုတ် almshouses. အထူးရှိတယ် တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း တွင် နွေဦး လာသောအခါ daffodils ကော်ဇောသမိုင်းဝင် begijnhof ဆုတ်ခွာနေ၏ငြိမ်းချမ်းဝင်း, သို့မဟုတ် ဆောငျးရာသီ (မှတပါး ခရစ္စမတ်) သင်လျှင်ခမ်းနားရေခဲများရှိနိုင်ပါသည်သည့်အခါ, နီးပါးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်မြို့.
အလည်အပတ် delirium ကဖေး
သငျသညျဆိုရင် ပါတီပိုမိုရှာဖွေနေ, ထို့နောက်ရထားအားဖြင့်ကိုယ့်ကတခြားသူချင်းကျောင်းသားခရီးသွားနဲ့တူဘရပ်ဆဲလ်ရန်မီးရထားပေါ်ခုန်, and visit delirium ကဖေး သူတို့ရှိသည်ဘယ်မှာ 2500 အမျိုးမျိုး ဘီယာ ကိုထိပုတ်ပါအပေါ်! တွေ့ရှိရန်အလွန်လွယ်ကူဒါဟာင်. သင့်အနေဖြင့်ပန်းရောင်ဆင်၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား Delirium နိမိတ်လက္ခဏာကိုလက်လွတ်မနိုင်.
Ibiza အတွက်ပါတီကိုသွားပါ, စပိန်
သငျသညျနုပျိုနေတဲ့အခါမှာတချို့ကအမှုအရာသင်သာနှင့်အတူကွယ်ပျောက်ရနိုင်, ညဉ့်နိုက်(s ကို) ကွာ Ibiza အတွက်သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်! အဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ပွဲအတွက် Ibiza မှရထားပေါ်တွင်ဤနေရာသို့သွားရန် ရက်သတ္တပတ် အမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံ! These two weeks, အဆိုပါ အဖွင့်ဖြစ်ပျက် မေလနှင့်ထဲမှာ ပိတ်ပွဲ သြဂုတ်လ / စက်တင်ဘာလထဲမှာ, အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကြီးမားသည့်နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ.
ကိုသွားပါ ကျွန်း, ဘူဒါပက်ခုနှစ်တွင်ဥရောပရဲ့အကြီးမားဆုံးဂီတပွဲတော်, ဟန်ဂေရီ
သငျသညျတခုကြီးမားသောပန်ကာဆိုရင် ဂီတပွဲတော်များ သငျသညျ Sziget ဦးစားပေးလုပ်သင့်တယ်. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဤရက်သတ္တပတ်ကြာပွဲတော်သင်ဟာတစ်ခုခုကိုစခန်းကမှာတတ်နိုင်သမျှကြီးမားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များမှအိမ်ရှင်ကစား, သို့မဟုတ် ဘူဒါပက်အတွက်နေထိုင် အဆိုပါပွဲတော်အတွက်မြို့၏ဗဟိုရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်ရာအရပ်ကိုကြာအဖြစ်ပဲကျောက်ခဲတပစ်ပယ်သွားရာဖြစ်ပါသည်! and many students like you Student Travel by Train there.
Edinburgh ခုနှစ်တွင်ဝိညာဉ်အမဲလိုက်ခြင်း Go, Scotland asaStudent Travel by Train
ဝေးအလုပ်များ Edinburgh လမ်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှောင်မိုက်အဲဒီမှာတည်ရှိသည်, တိတ်ဆိတ်သော, မေ့လျော့သောအရပ်. အလယ်ပိုင်း 1980 ခုနှစ်တွင်အစုတခု မွေအောကျ Vault ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် - နီးပါးနှစ်ရာနှစ်ပေါင်းစွန့်ပစ်ခဲ့အခန်းများ. ဤရွေ့ကားအံ့သြဖွယ်မှောင်မိုက်အခန်းပေါင်းရှေးခေတ် Edinburgh ကျောက်တည်ဆောက်လျက်ရှိ, ခုံးမျက်နှာကျက်နှင့်အတူ, မီးဖို, နှင့် 18ကြိမ်မြောက်ရာစုစပျစ်ရည်ကို ပင်လယ်ကမ်းစောင်း. သငျသညျသရဲတစ္ဆေမယုံကြည်ကြပါလျှင်ဤခရီးစဉ်ကို Edinburgh ၏သမိုင်းကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့စေသည်. ဒါကလုံးဝထိုက်သည် 13 Quid (11 သငျသညျကျောင်းသားတစ်ဦးဆိုရင်!).
ဥရောပရထား Tours မှယူဤမျှလောက်များစွာသော, ဒါကြောင့် အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျဖို့အများကြီးသောနေရာများ! ကျနော်တို့သင်ရထားကကျောင်းသားခရီးသွားအဖြစ်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည့်အရာကိုပဲတစေ့တစောင်းကိုကမ်းလှမ်း. Save A Train ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ and travel to any place your heart desires in Europe.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstudent-travel-by-train%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / ru သို့မဟုတ် / TR နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / fr ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#fun europeantravel ကြောငျးသား ကျောင်းသားများအတွက် ဘူတာရုံ ရထားခရီးသွား ခရီးသွား
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ရထားဖြင့်အီတလီ Exploring များအတွက်ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ